Gomo, ကန့်သတ်အချိန်ရောင်းအားအပေါ် | ငါက Mac ကပါ
Gomo, Mac App Store မှာအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းပါတယ်
Gomo ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 2D ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် 8,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်သာ 1,99 € သင့်ပိုင်ဆိုင်နိုင် ဒီဂိမ်းကသင့်ကိုဝေးလံတဲ့နေရာ၊ လျှို့ဝှက်ချိုင့်ဝှမ်းမှာခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ Gomo နှင့်သူ၏ခွေး Dingo သူတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ၍၊ သို့သော်မကြာမီတွင်ဤနတ်သမီးပုံပြင်ချိုင့်ဝှမ်းသည်ပြင်းထန်သောနိဂုံးကိုတွေ့မြင်ရတော့မည် အမည်မသိဂြိုလ်သားအင်အား Gomo ၏မိတ်ဖက်ကိုပြန်ပေးဆွဲ။ သင်ချစ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြန်ယူရန် Gomo ဂြိုလ်သားအတွက်ထူးဆန်းတဲ့ကျောက်ဆောင်ကိုရှာရမယ်။ သို့သော်ဤကျောက်သလင်းသည်လုံခြုံစွာကာကွယ်ထားသောမြေအောက်တွင်း၌တည်ရှိပြီးမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ၊ သင်သည် the ည့်သည်ကိုနာခံရမည်။ ဂိမ်းက လုံးဝစပိန်အတွက်.
သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုသင်မည်မျှဝေးဝေးသွားမည်နည်း။ Gomo အတွက်၊ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ လိုအပ်ပါကကမ္ဘာ၏အဆုံးနှင့်ကျော်လွန်ပြီး.
ထူးဆန်းတဲ့မှတဆင့်ဤခရီး၌သူ့ကို join 2D မြေများ ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီး Adventure ကိုနှိပ်ပါ။ Gomo ကိုသင်ကူညီချင်ပါသလား။ ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသောပဟေlesိများပြည့်နှက်နေသည့်လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်သောခရီးအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ ဒီဂိမ်းမှာ အလွန်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ratings။ မင်းကကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရုပ်သွင်ကိုကြည့်ပြီးအရမ်းကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဆီကို ဦး တည်သွားမှာပါ။
"Deponia"၊ "The Secret World" နှင့် "Edna & Harvey - The Escape" စီးရီးများကိုဖန်တီးသူများကတင်ပြသည်။
လွန်ပြီးလွန်ကဲသောအိပ်မက်မြင်ကွင်းတွင် Point & Click ရှာဖွေရေး။
တင်ပါတယ်: 10 / 04 / 2014
အရွယ်: 274 ကို MB
ဘာသာစကား: စပိန်, ဂျာမန်, စလိုဗက်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီ, ပိုလန်, ရုရှား
compatibility: OS X 10.7 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Gomo, Mac App Store မှာအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းပါတယ်
Simplenote ကိုဗားရှင်း ၁.၁ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်